Izindaba - Yini ucwecwe lwethusi olugoqiwe (RA) futhi lwenziwa kanjani?
Igingqelweucwecwe lwethusi, ucwecwe lwensimbi oluyindilinga oluyindilinga, lwakhiwe futhi lukhiqizwe ngendlela yokugingqa ngokomzimba, inqubo yalo yokukhiqiza kanje:
Ingoting:Impahla eluhlaza ilayishwa esithandweni esincibilikayo ukuze siphonswe engosini emise okwekholomu eyisikwele.Le nqubo inquma impahla yomkhiqizo wokugcina.Endabeni yemikhiqizo ye-alloy yethusi, ezinye izinsimbi ngaphandle kwethusi zizohlanganiswa kule nqubo.
Kunzima(Kushisayo)I-Rolling:Ingot iyashisisa futhi igoqelwe ibe umkhiqizo ophakathi ogoqiwe.
Ukunqunywa kwe-Acid:Umkhiqizo ophakathi nendawo ngemva kokugoqa okunzima uhlanzwa ngesisombululo se-asidi esibuthakathaka ukuze kukhishwe ungqimba lwe-oxide nokungcola ebusweni bento.
Ukunemba(Kubanda)I-Rolling:Umkhiqizo ophakathi nendawo ohlanziwe uyagoqwa kuze kube yilapho ugoqwa ugqinsi oludingekayo.Njengoba impahla yethusi inqubo rolling, ubulukhuni bayo siqu impahla kuyoba lukhuni, impahla eqinile kakhulu kunzima rolling, ngakho lapho impahla ifinyelela ubulukhuni obuthile, kuyoba annealing Lesisemkhatsini ukunciphisa ubulukhuni impahla, ukuze kube lula rolling. .Ngesikhathi esifanayo, ukuze ugweme ama-rolls enqubweni yokugoqa ebusweni bezinto ezibangelwa ukugqamisa okujulile, izigayo eziphezulu zizofakwa phakathi kwezinto kanye nama-rolls efilimu yamafutha, inhloso ukwenza. indawo yokugcina yomkhiqizo iphezulu.
Ukwehlisa amafutha:Lesi sinyathelo sitholakala kuphela emikhiqizweni ephezulu, inhloso ukuhlanza amafutha omshini alethwe ezintweni ngesikhathi sokugoqa.Enqubweni yokuhlanza, ukwelashwa kokumelana ne-oxidation ekamelweni lokushisa (okubizwa nangokuthi ukwelashwa kwe-passivation) kuvame ukwenziwa, okungukuthi i-passivation agent ifakwa esixazululweni sokuhlanza ukunciphisa i-oxidation kanye nokuguquka kombala kwe-foil yethusi ekamelweni lokushisa.
Ukugcwalisa:I-crystallization yangaphakathi yezinto zethusi ngokufudumeza ekushiseni okuphezulu, ngaleyo ndlela kunciphise ubulukhuni bayo.
I-roughening(Uma uthanda): Ingaphezulu le-foil yethusi liyaqina (imvamisa impushana yethusi noma impushana ye-cobalt-nickel ifafazwa phezu kwecwecwe lethusi bese yelapheka) ukuze kwandiswe ukukhahlamezeka kwe-foil yethusi (ukuqinisa amandla e-peel).Kule nqubo, indawo ecwebezelayo iphinde iphathwe nge-high-temperature oxidation treatment (efakwe nge-electroplated ngongqimba lwensimbi) ukwandisa ikhono lezinto zokusebenza emazingeni okushisa aphezulu ngaphandle kwe-oxidation nokushintsha umbala.
Ukusika:impahla ye-foil yethusi egoqiwe ihlukaniswe ububanzi obudingekayo ngokuya ngezidingo zekhasimende.